မလိုတဲ့ EMAILS တွေကို ကိုယ့်ဆီ လုံးဝ ဆက်သွယ်လို့မရအောင် Block လုပ်နည်း | Mobile Master (ပခုက္ကူ-ကမ္မ)
မလိုတဲ့ EMAILS တွေကို ကိုယ့်ဆီ လုံးဝ ဆက်သွယ်လို့မရအောင် Block လုပ်နည်း
1. သင့် account ကို ၀င်ထားလိုက်ပါ2. Settings ကိုနှိပ်ပါ3. Filters ကိုနှိပ်ပါ4. “Createanew filter“, ကိုနှိပ်ပါ5. Email From မှာကြည့်ပြီး မလိုတဲ့မေးလ်တွေကို ထည့်ပါ ဒီနေရာမှာ ကြည့်ကျက်လုပ်လိုက်ပေါ့နော် အသေးစိတ်ပြောဖို့ မလိုအပ် ဘူးထင်လို့ပါ ဒိုမိန်းလဲရတယ်နော် မေ့မှာစိုးလို့6. Next Step ကိုနှိပ်ပါ blocked emails တွေကို select လုပ်ပါ Delete လုပ်ပေးလိုက် blocked email တွေ အားလုံး trash ဖိုင်ထဲရောက်သွားပါမယ် unblock လုပ်ချင်ရင် filter လုပ်ထားတာကို ဖျက်ပစ်လိုက်ရင်ရပါပြီor Yahoo mail အတွက်1. သင့် account ကို ၀င်ထားလိုက်ပါ2. Options ကိုနှိပ်ပါ3. MOptions ကိုနှိပ်ပါ4. ညာဘက်မှာ option Filters ကိုရွေးပါ create (သို့) edit filters ကို နှိပ်ပါ5. Add ကိုနှိပ်ပါ6.နောက် screenမှာ, block ချင်တဲ့ email address ပုံစံအောက်မှာ filter နာမည်ပေးချင်ပေးပေါ့Move the message to: Trash ပြီးရင် Save ChangesHotmail အတွက်1. သင့် account ကို ၀င်ထားလိုက်ပါ2. Options ကိုနှိပ်ပါ3. MOptions ကိုနှိပ်ပါ4. Safe ကိုနှိပ်ပါ Junk e-mail အောက်မှာ blocked senders link ရှိပါတယ်5. Blocked senders ကိုနှိပ်ပါ6. blocked e-mail address အောက်မှာ သင်မလိုချင်တဲ့ မေလ်းကိုထည့်ပါ သို့မဟုတ် domain field ပေါ့ဗျာ